पार्टीको आन्तरीक प्रतिष्पर्धा स्वस्थ हुनु पर्नेमा मेरो बदनाम गराउन खोज्नु राजनैतिक बेईमानी हो रुपक न्यौपाने - sambahak
Home अन्तरबार्ता पार्टीको आन्तरीक प्रतिष्पर्धा स्वस्थ हुनु पर्नेमा मेरो बदनाम गराउन खोज्नु राजनैतिक बेईमानी...
तपाइँको परिचय दिनुहोस् न।
म रुपक न्यौपाने। दधिकोट बस्छु।
तपाइँको पारिबारीक राजनैतिक पृष्ठभूमी भन्दिनुहोस् न ?
मेरो पारबारीक राजनैतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेसनै हो। मेरो हजुरबुबा लेखनाथ न्यौपाने नेपाली कांग्रेसबाट सांसद सम्म बन्नु भएको छ। उहाँको नेपाली कांग्रेस पार्टी सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पुरयाउनु भएको छ। पार्टी जहिले पनि उहाँसँग सल्लाह सुझाब लिने गरेको छ।त्यही परिबारमा जन्मि हुर्केको हुँ।
कहिले देखि राजनीतिमा लाग्नु भयो नि ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीको राजनैतिक पृष्ठभूमि भएको परिवारमा जन्मी हुर्केकोले पनि म सानै देखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेको हूँ। घरमा ठूला नेताहरू आउने र हजुर बुबासँगको हेलमेलले बीपीको बिचारधाराबाट प्रभाबित भएर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सानै उमेरदेखि लागेको हुँ। बिद्यालयबाटै राजनीति सुरु गरेको मैले भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा नेबिसंघ जिताउन स्वबियु चुनाबमा सभापति जीवन खत्रीको प्यानललाई ठूलो सहयोग गरेँ। विद्यार्थी राजनीतिमा कहिल्यै पदको लोभ गरिन।
कुनै पदमा बसेर त राजनीति गर्नु भयो होला नि ?
मलाई पार्टी सुदृढीकरण गर्न पद चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन।
कुनै पनि पद नलिई अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रबेश गराउने काम गरेको छु। त्यही कामको मुल्याङ्कन गरि जिल्लामा संगठन बिभाग सदस्यमा मनोनित भएर काम गरिरहेको छु। जगदिश बस्नेत ज्यूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रबेश गराएर गुण्डुको संगठन बिस्तारमा उल्लेखनीय काम गरेको छु। कार्यक्रमहरूमा कार्यकर्ताहरूको सहभागी गराउने कुरामा पहिला मलाई नै सम्झिन्छन्।
राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
राजनीतिलाई मैले समाज सेवाका रुपमा लिएको छु। राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन। विभिन्न पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रबेश गराएर पार्टी बिस्तार र सुदृढीकरणमा लागेको छु। मैले गरेको समाज सेवाबाट नै अन्य पार्टीबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रबेश गराउन सफल हुँदै आएको छु।भूकम्पको बेला होस् या कोरोना भाइरसको महामारी आफ्नो ज्यानको बाजि लगाएर जनताको घरघरमा ,दैलो दैलोमा पुगी खाद्यान्न लगायत सामाग्रीहरू बितरण गरेको छु।
राजनीतिलाई समाजसेवा भन्नू हुन्छ।यहाँ त राजनीतिलाई पेशा बनाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि।
तपाइँले भनेको केही हद सम्म साँचो पनि हो। आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्न पनि पदमा पुगेका हुन्छन्। तीनिहरूकै कारण राजनीति फोहोरी खेलमा परिणत हुँदैछ।बेलैमा हामी जस्ता सचेत युवाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई झकझक्याउन सक्यौं भने राजनीति सङ्ल्याउन सक्छौ। म घर जग्गा ब्यबसायमा संलग्न छु। मैले राजनीतिलाई पेशा बनाईरहनु पर्दैन। बिशुद्ध समाजसेवाकोलागि राजनीति गरेको हूँ। समाजसेवामा अहोरात्र खटिरहन्छु।
पार्टीले मुल्याङ्कन गरेको छ त तपाइँलाई ?
केही हद सम्म मुल्याङ्कन गरेको छ भन्नै पर्छ। जिल्ला संगठन सदस्य मनोनित भएर काम गर्न पाएँ। यतिका बर्ष कुनै पनि पदमा नबसी राजनीति गर्दा अौचित्य नहुने देखेर सांगठनिक रुपमा राजनीति गर्न चौधौं महाधिबेशनमा नगर सह सचिब पदमा उमेदबारी दिएको छु।
निर्बिरोध हुनु हुन्छ त।कस्तो हुदो रहेछ राजनीति गर्न ?
सहमति जुट्न नसकेरै सूर्यबिनायक नगरमा चुनाब हुने भयो।
सूर्यबिनायकमा दुई प्यानल भएर चुनाब प्रचारप्रसार भई रहेको छ। एउटा प्यानल सभापतिमा निशान ढुङ्गेल हुनु हुन्छ भने अर्को प्यानलमा सभापतिमा रबी राणा हुनुहुन्छ। म रबी राणाको प्यानलबाट सहसचिबको उमेदबार हुँ। राजनीति बुझ्नै कठिन छ। झन् राजनीति गर्न कति गाह्रो होला ? यतिका बर्ष पद नै नलिई काम गर्दा पार्टीले सही मुल्याङ्कन गर्न सकेको छैन।यसमा दुस्ख मनाउ केही छैन। तर दुःखको कुरो चुनाबको मुखमा रुपक नेपाली कांग्रेसमा छैन। माओबादीमा प्रबेश गरिसक्यो भन्दै मेरो यतिका बर्षको नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक ईतिहास धमिल्याउने काम नेपाली कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट हुनु दुखद् छ। अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा नेता तथा कार्यकर्ता भित्र्याउँदै हिड्ने म आफैं अन्यपार्टी कसरी प्रबेश गर्न सक्छु। राजनैतिक अराजकको चंगुलमा परेको छु आज। पार्टीको आन्तरीक प्रतिष्पर्धा स्वस्थ हुनु पर्नेमा मेरो बदनाम गराउन खोज्नु राजनैतिक बेईमानी हो।
चुनाब जित्नु हुन्छ तरु जित्नु भयो भने के गर्नु हुन्छ ?
चुनाब हो हार जीत त भै हाल्छ नि। हामीले काम गरेको हेर्दा चुनिएर आउनु भएका प्रतिनीधिहरूले हाम्रो पक्षमा मतदान गरि जिताउनु हुन्छ। भन्ने लागेको छ। चुनाब जितेँ भने नेपाली कांग्रेसलाई सूर्यबिनायक नगरपालीमा सुदृढ बनाउन लागि पर्नेछु। नेपाली कांग्रेसबाट उमेदबार बन्ने सबै जनप्रतिनीधिलाई जिताउनेछु। चुनाबमा प्यानल बनाएर उठेपनि स्थानीय निर्बाचन र प्रदेश तथा संघको निर्बाचनमा बिपक्षि बिरुद्ध एक भएर लड्ने माहोल बनाउनेछु। जिम्मेबार बनेर लागेका कार्यकर्ताको मुल्याङ्कन गरि उचीत स्थानमा जिम्मेवारी दिने छु।युवाहरूलाई विशेष भूमिका दिनेछु।
युवाहरूको कुरा गर्नु भयो। चौधौं महाधिबेशन अन्तर्गत
भक्तपुर जिल्लाको अधिबेशनमा कस्तो भूमिका खेल्नेछन् युवाहरूले ?
भक्तपुर जिल्लाको ३८ वटै वडामा वडाकार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनीधिहरू चयन भईसकेका छन्। वडाकार्य समितिको नेतृत्व पनि धेरैवटा वडामा युवाहरूले लिएका छन्। क्षेत्रीय प्रतिनीधिहरू पनि धेरै चुनिएर आएका छन्। नगर,प्रदेशसभा,क्षेत्र र जिल्लामा युवाहरूले राम्रो प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। जसले भक्तपुर कांग्रेस सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ। युवाहरूलाई बिकास निर्माणमा सहभागी गराएर भक्तपुरलाईसमुन्नत जिल्ला बनाउन सकिने छ।
हामी घर भित्रकै समस्या मिलाउन लागेका छौं। घरमूली छान्ने क्रममा निराधार लान्छनाले घर बलियो हुँदैन। सहमति हुन नसके लोकतान्त्रीक प्रकृया हो चुनाब। चुनाबमा सबै होमिउँ, प्रतिष्पर्धा गरौं तर स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरौं।
Previous articleसुवास चन्द्र ढुंगेलको मुक्तकको कथा थालनी
Next articleचाँगुमा गोपाल पौडेल र शिवहरी केशी प्यानलको भिडन्त